Moe Kai: Life unexpected!
နောက်တယောက် ကတော့ တောင်ပေါ် တောလမ်းတွေပေါ်မှာ စက်ဘီးစီး ပြိုင်ကြတဲ့ Mountain Bike Competition မှာပါ။ လမ်းတွေက ကျောက်တုန်းတွေနဲ. အတက်အဆင်းတွေ လုပ်ထားတော့ ကျမမှာ ဒီ အင်တာနေရှင်နယ် အားကစား သမားတွေများ စက်ဘီးမှောက်ပြီး ဒါဏ်ရတွေများ ရကုန်ရင် ဆုိုပြီး အတော် ရင်ပူခဲ့ရပါတယ်။ ဟော တကယ် ဒါဏ်ရာရတယ် ဆိုတော့ အသက် ၇၀အရွယ် ပွဲလာကြည့်တဲ့ ဘကြီးတယောက်။ တုတ်ကောက် ချော်သွားပြီး တောလမ်းတလျှောက် ဟုိုးအောက်ကို လိမ့်ကျသွားလို. ကျမတို.မှာ မနဲ (တောလမ်းမှာသယ်တဲ့ Fancy Car ကြီးနဲ.) သယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အားကစား သမားတွေကတော့ ဒါဏ်ရာ အသေးအဖွဲ ကွဲရုံ ပြဲရုံလောက်သာ။
ဒိုက်ဗင်း (Diving) ပြိုင်ပွဲမှာလဲ နောက်ထပ် ဘကြီးလူနာ တယောက် မူးလဲလို. စမ်းသပ်ကြည့်တော့ Atrial Fibrillation လို.ခေါ်တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ် တအားမြန်နေတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေနဲ.မို. ဆေးရုံကို အမြန် ပို.ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး တယောက်ကတော့ မာရသွန် ပြိုင်ပွဲတုန်းကပါ။ မိုင်၂၀မှာ တာဝန် ကျတာဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အေးဆေးပါဘဲလို. ထင်တာ။ ကျမတို. Station ရဲ. အရှေ. ၄လွှာတုိုက်ခန်းပေါ်က ဘကြီး (တော်တော် ဆိုးတဲ့ ဘကြီးတွေပဲနော်) ဝရမ်တာကနေ ရင်ပတ်ကြီးဖိပြီး “အီး အီး ... Helppppp” အော်လို. အားလုံး အေးဆေး အပန်းဖြေ၊ ပြိုင်ပွဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့ ကျမတို. တသိုက် ချွေးတဗြိုက်ဗြိုက် ကျခဲ့ရပါသေးတယ်။ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲလာတာ ဘယ်သူက ၄လွှာကနေ လူနာသယ်ဆင်းရမယ်လို. ကျိုမြင်ထားပါ့မလဲ။ မာရသွန်ကြောင့် လမ်းတွေ အားလုံး ပိတ်ထားတော့ ပုံမှန် လူနာတင်ယဉ်တွေက လမ်းထဲမလာနို်င်။ ကျမတို.ဘဲ အစအဆုံး ကူညီခဲ့ရပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ရစရာလေးတွေက ဘဝမှာ ကျိုပြင်နိုင်တာပြင်လို.၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေနဲ. ကြုံလာရင်လဲ ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်တတ်အောင်ပါ။ ကျမကိုယ် ကျမ ရဲရင့်စွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို.တော့ မဆိုလိုနိုင်ပါ။ အဲဒီအချိန်က တယောက်ယောက်သာ ကျမရင်ကို ထိုးဖောက် မြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျမရဲ့ နှလုံး ငယ်ငယ် နုနုလေးဟာ မုန်တိုင်းကြားမှာ သနားစရာ အဖြစ်နဲ. တွေ.ရမှာပါ။ အခုတော့လဲ ပြီသွားပြီဆိုတော့ ရယ်စရာ အတွေအကြုံ တခုရယ်လို. ပြန်ပြောလို. ရပြီပေါ့နော။